Le astrophotographer ipapasha ifoto yenyanga yeefoto ezingama-150.000 | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iifoto ezingama-150.000 ukubonisa imibala efihliweyo yenyanga
UAndrew McCarthy ngumbhali weenkwenkwezi oqhubeka nokumangalisa ngeli xesha kwihlabathi liphela ngomsebenzi wakhe obalaseleyo kwicandelo elithile lokufota. Emva kokusiqhayisa ngesisombululo esiphakamileyo somfanekiso we-50.000 iifoto, uyenza kwakhona ngomnye umsebenzi.
Kwakunjalo kanye ngale projekthi yenyanga wayenethuba lokwenza umbala wombala wento eboniswa yimephu yenyanga. Xa iyonke ithatha idatha yemibala engaphezulu kwe-150.000 yeefoto ukuzisa ifoto yobugcisa engama-64MP umbala wenyanga.
Ngeli xesha, lo mfanekiso uphakamisa Ubeko lwenyanga ukuveza imibala yalo efihliweyo kwaye ke ngokwahlukileyo kumfanekiso wakutshanje awupapashileyo Ngokwenyani yonke loo mibala ibonisa izinto eziqulethwe yinyanga kunye nokuba inyanga ibiya kujongeka njani ukuba amehlo ethu ebekhathalele umbala.
Sasuka kumbala oluhlaza okwesibhakabhaka obonisa oko Umxholo ophezulu we-titanium ukujika iorenji ibonisa i-basalt titanium ene-basalt. Ngamanye amagama, umfanekiso wejografi wenyanga obonisa ezona zimbiwa zityebileyo kwimeko yenyanga enomfanekiso ongaphezulu kokumenyezela.
Imifanekiso yoqobo yenziwa kusetyenziswa iifoto ezifotwe kwiikhamera ezimbini enye ikhathalela i-halo yeenkwenkwezi, umbala kunye neatmosfera, ngelixa enye inyamekele iinkcukacha zomphezulu kunye nokwakheka okufanayo.
Eyona nto ilunge kakhulu yile ungayikhuphela njengefayile kwifomathi yeJPG enobunzima obuyi-11 MB kunye enye iPNG efikelela kwi-23 MB. Inayo ivenkile ekwi-intanethi apho ifumana khona loo nyanga icace gca ngemibala kwaye ibandakanya nemephu yokwakheka komhlaba yesathelayithi yethu.
Ungasoloko usondela kule nqaku malunga nenyanga kunye neziqu zezulu zomfundisi-ntsapho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » Iifoto ezingama-150.000 ukubonisa imibala efihliweyo yenyanga
I-Twitter ihlaziya ilogo yayo, kodwa ngaphandle kweyona nto iphambili kuyo: intaka yayo
I-Photopea, enye indlela yasimahla ekwi-Intanethi kwiFotohop